Ungachinja sei manapukeni emwana?
Kuchinja manapukeni kwakakosha kune vacheche, nekuti zvinobatsira kudzivirira kutsamwa uye kumhanyisa kwazvinoita. Nekudaro, kune vakawanda vabereki vatsva vasina ruzivo nevana, matambudziko anoitika pavanenge vachichinja manapukeni evacheche, kunyangwe kana vakatevera kuraira kwepanapa ...
Global Diaper Musika - Maindasitiri Maitiro uye Kukura
Musika wepasi rose wevacheche musika waive US $ 69.5 Bhiriyoni muna2020 uye inotarisirwa kusvika pamutengo weUS $ 88.7 bhiriyoni na2025, nekomboni yekukura pagore ye5.0% kubva muna 2021 kusvika muna 2025. Chinjere chakagadzirwa nezvinhu zvinogadzirwa zvinoraswa kana jira. Mumakore achangopfuura ...
Kutumira Alert! Nyika Idzi Dzakazivisa Lockdown Zvakare! Global Logistics Inogona Kunonoka!
Sezvo kusiyana kweDelta kwe COVID-19 kuri kupararira pasirese, iyo yave musiyano mukuru wedenda munyika zhinji, uye dzimwe nyika dzakabudirira kudzora denda iri hadzina kugadzirira futi. Bangladesh, Malaysia, Australia, South Af ...
Mari yekutumira ichawedzera Zvakare Kubva Chikunguru 1st!
Kunyangwe Yantian Port iri kutangazve mashandiro, kuzara uye kunonoka kweSouth China zviteshi uye zviteshi uye kuwanikwa kwemidziyo hakuzogadziriswa nekukasira, uye kukanganisa kwacho kuchazowedzera zvishoma nezvishoma kuchiteshi chekuenda. Kuunganidzwa kwechiteshi, Navigatio ...
Tarisiro yeDhivha Indasitiri | Sustainability, Natural Ingredients, Mamwe Mabasa?
Euromonitor International Health uye Nutrition Survey 2020 yakashuma zvinhu zvishanu zvepamusoro zvekugadzira vatengi veChinese kuti vange vachiisa mari yakawanda mumachira. Sekureva kweshumo, 3 yezvinhu zvishanu ndeiyi: zvigadzirwa zvechisikigo, kugadziriswa kwekutenga / kugadzira, uye biodegradability. H ...
Uri Kutsvaga Yakanaka Yemhando Dhivha? Iwe haugone kupotsa izvi!
Kwemakore anopfuura gumi achitarisa pamabhizimusi emwana mucheche, Besuper Diaper anogara achigamuchira akanaka ongororo yevatengi, kubva kune ese ari maviri B2B (bhizinesi kune bhizinesi) kana B2C (bhizinesi kumutengi) vatengi. ...
China Yekuchengeta Vacheche Indasitiri Inowedzera Mabhenefiti Kubva kuTatu-mwana Mutemo
Mushure mokunge nyika isingatarisiri yafunga kubvumidza vese vakaroora kuve nemwana wechitatu, maChina ane chekuita nemwana masheya akasimuka kwezuva repiri rakateedzana. Dairy zvigadzirwa kambani Beinmei Kambani yakakwira gumi muzana muSenzhen, nepo kubereka kiriniki serv ...
Nei tichifanira kusarudza manapukeni asina chlorine evana vedu?
Mukutsvaga kwako manapukeni akakodzera emwana wako, pamwe urikutsvaga manapukeni akachengeteka, akachena, uye anoshanda. Iwe unogona kunge wakamboona TCF mazwi kana zvirevo pamhando dzakasiyana dzemapepa, ayo anomiririra 'yakazara chlorine yemahara'. Kana iwe uri kushamisika kuti nei chlorine inoshandiswa mune imwe diape ...
Chengetedza Yekuvhura Alert! Kutanga online zvitoro muMalaysia!
Akanaka nhau mammmy uye vanababa! Isu tave kuvhura yedu yekutanga online zvitoro muMalaysia! Manapukeni anowanikwa mune aya mashopu maviri: Shopee: https://shopee.com.my/besuper Lazada: https://www.lazada.com.my/shop/besuper-hygiene/ Kana iwe uchitova neShoppe kana Lazada APP pa wako pho ...
Unoziva here kuti nei mwana aine manapukeni manapukeni?
Dhayeti rashes inokura munzvimbo dzinodziya uye dzine hunyoro, kunyanya mumachira emwana wako. Iwe ganda remucheche rinozovava, kutsvuka uye kupfava kana iye / aine manapukeni. Izvi zvinounza mwana wako kurwadziwa kukuru uye kutomuchinja iye / maitiro ake. Zviratidzo · pink kana zvigamba zvitsvuku paganda · irritat ...
Bharoni Akave Akazivikanwa SeMuchinjiro SKA Mutengesi paAlibaba International Platform!
Inofadza nhau yambiro！ Bharoni yakave yakasimbiswa seyadhi ye SKA (= Super Key Account) mutengesi paAlibaba International Platform! Izvi ...
Eucalyptus Vs. Cotton - Nei Eucalyptus iri Mucheka weRamangwana?
Nemicheka yakawanda yemachira yekusarudza kubva, zvakaoma kuziva kuti ndechipi chinhu chingapa vacheche kana vashandisi manapukeni manzwiro akanaka. Ndeupi musiyano pakati peeucalyptus, uye machira ekotoni? Ndezvipi zvaizobuda pamusoro kunyaradzwa? Heano kufanana uye mutsauko pakati peeucalyp ...
Mucheka unoraswa, Vacheche Vanopukuta Kune Rinonzwisisa Ganda, Yakakwira Hunhu Eco Diaper, Mwana mucheche, Super Absorbency Yevakuru Dhivha, Mwana mucheche achangoberekwa,
Yakakwira Hunhu Eco Diaper, Mwana mucheche achangoberekwa, Super Absorbency Yevakuru Dhivha, Mucheka unoraswa, Vacheche Vanopukuta Kune Rinonzwisisa Ganda, Mwana mucheche,